Spectrocoin Debit Card ukubuyekeza - Bitcoin Ikhadi Ukuqhathanisa 2018
Bitcoin Debit Card Ukuqhathanisa 2018 Bitcoin Credit Card – Thenga Bitcoin nge Credit Card
Bitcoin Debit Card Imibuzo Evame Ukubuzwa
Bitcoin Debit Card Ukuqhathanisa
Spectrocoin Debit Card ukubuyekeza
Spectrocoin.com ihlose ukuhlinzeka bonke-in-one amasevisi Bitcoin abasebenzisi. Eceleni isikhwama bitcoin, balethe izidingo lokushintshisana, ikhadi bitcoin lasebhange, futhi isixazululo zabathengisi ngokwamukela bitcoin emisebenzini imisebenzi yabo yansuku zonke. Spectrocoin kuhlanganiswe nokwethenjelwa zobuchwepheshe nge banzi kwezingqalasizinda ukuze udale eliphezulu bitcoin inkonzo amaklayenti ayo.
Amasevisi Kuncike Spectrocoin
Spectrocoin inikeza ngamasevisi phambili kuya emuva ngoba noma ubani ukusebenzisa bitcoin emhlabeni wonke. Banezinhliziyo bitcoin e-isikhwama ukuthi kungenziwa ngqo oxhaswe bitcoins ukuthengwa kwezincwadi ku-exchange yabo. Ikhadi bitcoin lasebhange kwenza imali bitcoins kulula njengoba Fiat zezimali. Le nkampani futhi inikeza isixazululo yomthengisi ukuze bakwazi ukwamukela bitcoin ngokusebenzisa imisebenzi yabo ibhizinisi. Ukuze ukuhlanganiswa lula ngangokunokwenzeka ukuze wonke umuntu eceleni ye-API, Spectrocoin inikeza eCommerce-plugin futhi Imitapo zabathengisi futhi wesikhwama.
Bitcoin lasebhange usekelwa manjalo ngohlelo bitcoin, ngakho asikho isidingo ukushintshanisa cryptocurrency kusengaphambili yokukhokha. I Visa and plastic amakhadi ingasetshenziswa nganoma isiphi ATM emhlabeni wonke, le yenziwe base zezimali kukhona USD, EUR futhi GBP. Kokubili plastic kanye amakhadi virtual zamukelwa ngaleso ezingaphezu kuka 20 abayizigidi ezingu amasayithi kanye ezitolo inthanethi nge-inthanethi. Zinikeza inketho for abanikazi bamabhizinisi ukushintshela Bitcoin inkokhelo ukuze imisebenzi. Spectrocoin inikeza amakhadi inkampani njengoba isixazululo kulabo ngegxathu elilodwa emhlabeni digital.
Spectrocoin ikhadi - ngokungafani nezinye ikhadi eziningi lasebhange bitcoin - zithunyelwa kunoma yiliphi izwe emhlabeni, kuhlanganise ngaphandle kwelaseNdiya neChina kakhulu futhi iyatholakala izakhamuzi US kanye. lokuthumela Jwayelekile uma mahhala futhi ikhadi ifika 3-4 amasonto. Uma noma ubani ongathanda kusheshiswe lokuthumela, for imali eyengeziwe engu- $ 75 / ?? 69 / £ 50 okufinyeziwe lokuthumela khetho luyatholakala. Kulokhu ikhadi kungaba isandla umsebenzisi ?? s 4-5 izinsuku.
Spectrocoin wadala smartphone zokusebenza kulabo abadinga ukufinyelela izimali zabo ohambeni. Obani abangathanda ?? t kudingeka ukuthi? I Spectrocoin isikhwama iyatholakala ku-Google Play, App Store futhi e-Isitolo se-Windows.
Isevisi isebenzisa ezimbili isici ukugunyazwa ngemvume. Inqubo yokuqinisekisa akuyona ezinemininingwane kahle kwi website yabo. Ukuze uqinisekise abasebenzisi uqobo lwabo, kufanele unikeze passport esebenzayo noma ikhadi le-ID kanye bill Umbuso. Inqubomgomo aml inikeza imininingwane amadokhumenti, kodwa akukho ulwazi kangakanani inqubo ngokwalo kuthatha uma yonke into ihamba kahle.
abasebenzisi eliqinisekisiwe angalayisha Spectrocoin emakhadi abo esiphezulu 10000 USD ngesikhathi esisodwa. Spectrocoin ivumela max 2 ukuthengiselana ATM ngosuku, endaweni isamba 2000 USD. Akunamkhawulo for pos ukusetshenziswa futhi kubasebenzisi eliqinisekisiwe Spectrocoin inikeza POS umthwalo amasevisi kakhulu. Uma ikhadi Spectrocoin liqinisekisiwe, ke uyakwazi ukuthola izimali kusukela kubathengisi wesithathu efana PayPal Ukugembula amasayithi. Uma noma iyiphi imali is etholwe ikhadi ezingaqinisekisiwe, lezi zimali avimbelwe kuze khadi kuyaqinisekiswa.
abasebenzisi okungaqinisekisiwe zingasebenzisa amasevisi Spectrocoin, Nokho basuke ke wadalula imikhawulo ethile. Umkhawulo top-up lemali kuphela 2500 USD. Ngezinye ATM engaqinisekisiwe abasebenzisi bayakwazi ukuhoxisa kuphela 200 USD ngesikhathi esisodwa, 400 USD nsuku zonke kusukela esiphezulu 2 ukuthengiselana. Ubude ATM umkhawulo kubasebenzisi ezingaqinisekisiwe kuyinto 1000 USD. Ngokolunye uhlangothi, ngisho abasebenzisi ezingaqinisekisiwe ungakwazi ukuthenga nge-Internet noma ukhokhe at POS ezikhumulweni isamba angenamkhawulo imali debit card abo bitcoin. POS umthwalo sevisi ayitholakali kubasebenzisi ezingaqinisekisiwe.
I Spectrocoin UK uye awaqalisiwe 2013. Le nkampani ine headquarter yayo Landsdowne Umugqa, London. Baqala ukukhipha debit card bitcoin ngoMeyi, 2015.
Nakuba Spectrocoin akusho uhlu zabanikazi kwiwebhusayithi, ngokuvumelana Pitchbook kanye LinkedIn wesevisi bitcoin is owned by abantu abathathu abavela Lithuania.
Vytautas Karalevičius ngaphambi nokuxhasa Spectrocoin, kwadingeka izindima ezihlukahlukene njengoba umhlaziyi wezimali embonini. Umnikazi yesithathu Mantas Mockevicius onesifo degrees amaningi ezifundweni ibhizinisi emazweni omhlaba. Justas Dobiliauskas siyisikhulu esiphezulu ubuchwepheshe isikhulu e-uqalisa ngenxa yakhe 6+ iminyaka isipiliyoni s umthuthukisi kusofthiwe ibhizinisi nezinkampani okuklama.
Spectrocoin plastic izindleko bitcoin ikhadi $ 9.00 / ?? 8.00 / £ 6.00, ngenkathi ikhadi virtual kuphela $ 0.50 / ?? 0.50 / £ 0.50. Kukhona nyangazonke service icala Imali 1 USD kokubili plastic kanye virtual amakhadi. Nokho le mali icala uma ibhalansi ye-akhawunti kungu-zero. Futhi, akukho Imali sokungasebenzi, ngakho abasebenzisi ungazama ikhadi lula futhi ezishibhile.
Iyalayisha izindleko amakhadi khulula uma izimali Bavela-akhawunti Spectrocoin. Uma kungenjalo ukulayisha izindleko kuncike indlela esetshenziswa: Ukudluliselwa ebhange imahhala kodwa nge-credit card bona ukushaja kuze kufinyelele 5%. Uma ikhadi zithululwe a isikhwama bitcoin, kubiza 0.5% nenkokhiso okungenani $ 1.00 / ?? 1.00 / £ 1.00 at ngamunye bitcoin ukuthenga ukuthengiselana. Ngakho Ukudluliselwa amaningi ngemadlana encane zingakubiza eningi ekupheleni kulo msebenzisi.
Lapho usebenzisa i-ATM, amacala Spectrocoin 2.5 USD yasekhaya lwemali ukuhoxiswa kanye 3.5 USD nezinye lwemali ukuhoxiswa. Kukhona 3% lwemali Imali exchange ukuthi icala uma inkokhelo eyenziwe ngaphandle lwemali ezizenzakalelayo. Lapho ethola izimali ikhadi, imali POS mthwalo 1.99%.
Spectrocoin inikeza etholakalayo isilinganiso bitcoin intengo exchange at indawo yabo. Intengo bitcoin inikezwa 26 zezimali, kuhlanganise intengo ngegolide altcoins like dash kakhulu. I Spectrocoin bitcoin intengo luphakathi eyamukelekayo ibhidi-sipho uhla isilinganiso bitcoin intengo emakethe.
Inani $9.00/€ 8.00 / £ 6.00 $0.50/€ 0.50 / £ 0.50
Delivery 3-4 amasonto okuzenzekelayo
Imali ekhokhelwa isevisi nyangazonke icala ** $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
imali Ukungasebenzi MAHHALA / FREE / FREE MAHHALA / FREE / FREE
Ikhadi phezulu kuze kusukela SpectroCoin akhawunti 0% 0%
Ikhadi Bitcoin isikhwama (Ukuthenga bitcoin) 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00 0.5% + $1.00/€ 1.00 / £ 1.00
zokuqaleka ATM lwemali yasekhaya $2.5/€ 2.25 / £ 1.75 –
ATM kwezinye zezimali $3.50/€ 2.75 / £ 2.25 –
3rd umthwalo party 1.99% 1.99%
Ukushintshwa kwemali *** 3% 3%
lokuthumela Jwayelekile (kuya ku 3-4 amasonto) Mahhala –
lokuthumela okufinyeziwe (4-5 izinsuku) $75/€ 69 / £ 50 –
Umuzwa womsebenzisi Spectrocoin
Yesikhulumi Spectrocoin has a style blue and yellow ne umklamo singenabala. Ukuze ngidambise Ukufundwa amathebula efana isheduli zamanani, imigqa ezicijile kugcizelelwa nge egqamisa. into Encane, kodwa kuyasiza kakhulu uma ngabe umsebenzisi ufuna itafula hug ngezinhlu amaningi.
Ngesikhathi esigabeni intengo bitcoin, kukhona eshadini elibonisa intengo bitcoin okwesikhathi esikhathini esinikeziwe. Abasebenzisi kalula ufunde amanani mlando ngokuqondile ishadi kunoma yiziphi 26 zezimali.
Spectrocoin iwebhusayithi nakuba inikeza omningi ulwazi izinkonzo, namanje akubandakanyi konke Ukugunda ukuthi kungenzeka umsebenzisi esikhathini esizayo kungase kudingeke. I-FAQ ayinikezi umsebenzi search. Umugqa wesikhathi ukuqinisekiswa hhayi ezinemininingwane. Abanikazi inkampani kungukuthi lokuphekiwe isayithi. Lezi ulwazi wedwa akubonakali ebaluleke kakhulu, kodwa uma umsebenzisi ufuna okuthile futhi ungakwazi ukuthola, kungakudina. Ngenxa yalezi zimo Nokho Hot Line kanye Ukusekela kufanele ukwazi suffice.
Iphuzu elithakazelisayo lelo ezibalulekile ukuyengeza imiphumela yosesho ye-Google Spectroin. Kubonakala sengathi abanye abasebenzisi kwadingeka izinkinga inkampani njengoba iforamu bitcoin anezinye izihloko evulekile ngabantu ekhononda Spectrocoin uvala bitcoins futhi ayiphenduli imibuzo. Spectrocoin by kuze kube ungazange bavikela ngokwabo ngalezizinto. It is owaziwa ukuthi ngesikhathi exchange bitcoin ukulandisa bitcoins never ephephile, ngakho sikhuthaza wonke umuntu ukugcina bitcoins zabo ngokuphepha.
Bitcoin esikhokhelwa Ikhadi Imikhawulo
Inani eliphezulu Top-ups ngelanga 2
Max Top-up Inani lokuthenga ngayinye $10,000/€ 10,000 / £ 8,000
Max Top-up lemali ngosuku $20,000/€ 20,000 / £ 16.000
POS umthwalo *** Awukho umkhawulo
Max esaphila umthwalo Awukho umkhawulo
Inani eliphezulu ATM ukuthengiselana ngosuku 5
Max olulodwa ATM $1,000/€ 1,000 / £ 800
Max-ATM ngosuku $2,000/€ 2,000 / £ 1,600
Ubude ATM umkhawulo Awukho umkhawulo
Max POS lemali ngosuku (izitolo) Awukho umkhawulo
Inani eliphezulu ethula ukuba Bitcoin Wallet ukuthengiselana ngosuku 2
Min ethula ukuba Bitcoin Wallet $2/€ 2 / £ 2
Max ethula ukuba Bitcoin Wallet $2,250/€ 2.250 / £ 2,000
Ubude esaphila wehlise kusuka ekhadini Awukho umkhawulo
Spectrocoin sihlinzeke izinhlelo eziyinkimbinkimbi Bitcoin abasebenzisi. Amakhadi bitcoin lasebhange ayatholakala kubo bonke abasebenzisi emhlabeni wonke okuyinto pro zizinkulu kakhulu bitcoin izinkampani lasebhange asisekeli US izakhamuzi ingabe. Kumila umsebenzisi futhi wanda kakhulu Windows abasebenzisi mobile nje engeke idonse ngezinye bitcoin lasebhange abahlinzeki. Nakuba lolu hlelo kanye nokubiza kuqhathaniswa ehloniphekile, wemikhumbi kuyabiza futhi izikhalazo emhlabeni internet angase okwesabisa abasebenzisi furure endaweni yesikhulumi.
Bitcoin Amakhadi Ukuqhathanisa